Global Voices teny Malagasy » Singapour: Tokony ho ankatoavin’ny fanjakana ho ara-dalàna ve ny varotra taova? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jolay 2008 17:41 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Singapaoro, Fahasalamàna, Lalàna, Siansa, Zon'olombelona
Misy adihevitra  mafonja miainga ao Singapour : Tokony hankato ny varotra taova ho ara-dalàna ve ny governemanta ? Nanomboka tamin’ny volana lasa iny ny adihevitra raha voasambotra sy nampidirina am-ponja  ireo tanora Indoneziana roa nikasa hivarotra ny voany tamina lehilahy mpanankarena mpanao afera iray tao Singapour. Ny asa famindràna taovan’olombelona dia “mandràra ny fanomezana taova, na rà ka sandaina takalo ” ao Singapour.
mr wang dia maneho mazava tsara  ny resaka éthique ao anatin’ilay resaka:
Mitàna ny laharana fahadimy eran-tany amin’ny vokatry ny aretin’ny voa (insuffisance rénale) i Singapour. Raha araka ny famakafakana iray, 3,500 raha kely ny olona tratry ny aretin’ny voa ao ; 600 amin’ireo ny ao anatin’ny lisitra famindrana taova. Nefa tsy maintsy miandry hatramin’ny sivy taona  any ry zareo ireo mba hahazo avy amin’ireo mpanolotra aorian’ny fahafatesana.
Maro tamin’ireo soso-kevitry ny mpanoratra no nanana ny akony teo amin’ireo minisitra ao amin’ny governemanta izay nandefa tsilian-tsofina fa amin’ny hoavy dia hisy fepetra haroso mba hahafahana manao ny varotra taova. Carpe Deim-Seize the day koa dia mino  fa:
Saingy manohitra  ny varotra taova ny Fikambanana ara-pahasalamana ao Singapour. Kianin’i  Angry Doctor io fomba fijery io :
Ireo mpitoraka blaogy avy amin’ny finoana Katolika  dia mitsipaka ny varotra taova. A quiet moment dia nizara santionana vinavina avy amin’ny katolika :
Tsikerain ’i Sze Zeng ny fivarotana izay rehetra mikasika ny aina:
Mampitandrina  i Javert's World fa ny dikan’ny varotra taova dia ho “lasa haraton’aina ho an’ny mpanana ary ho fandripahana ny mahantra.” Mpitoraka blaogy iray hafa no manamarika ny varotra taova dia tsy hanafoana  ny tsenan’ny voa any amin’ny varo-maizina:
Mampitandrina  ny amin’ny mety ho fandaniana volavolan-dalàna mikendry ny hanararaotana ireo firenena mahantra mifanolo-bodirindrina amin’i Singapour koa i Anders Brink:
Ao anivon’ny resaka foana  i Irana matetika satria izy irery eran-tany no firenena manaiky ny varotra voa (antsoin’ny Iraniana hoe ‘fizaràna taova’).
Fanamarihana iray nentin’ny mpamaky tao amin’ny blaogin’i no maneho mivandravandra  teboka iray:
Raha mila fandalinana misimisy kokoa momba ny varotra taova (na ny fizahantany miharo famindràna) eran-tany, ny OMS dia manana fitaovana ho loharano tsara tokoa .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/07/29/1182/
 voasambotra sy nampidirina am-ponja: http://elyanigunadi.blogspot.com/2008/07/risk-worth-taking.html
 maneho mazava tsara: http://mrwangsaysso.blogspot.com/2008/06/issue-of-human-organ-trading-in.html
 sivy taona: http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/357386/1/.html
 mankasitraka : http://blinkymummy.blogspot.com/2008/07/of-kidney-angry-trade.html
 Nametraka : http://www.singaporelawwatch.sg/remweb/legal/ln2/rss/legalnews/57892.html?utm_source=rss%20subscription&utm_medium=rss
 koa dia mino: http://hasrul-carpediem.blogspot.com/2008/07/organ-for-sales-why-not-legalised-it.html
 manohitra : http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/360088/1/.html
 Ireo mpitoraka blaogy avy amin’ny finoana Katolika: http://dominicansingapore.wordpress.com/2008/07/22/i-let-you-buy-kidneys-you-let-me-buy-eggs/
 nizara : http://aquietmoment.wordpress.com/2008/07/17/organ-transplant-donation-or-trade/
 tsy hanafoana: http://th-december-risk.blogspot.com/2008/07/recent-commotion-about-2-cases-of.html
 manazava : http://ctfaircomment.blogspot.com/2008/07/organ-donation.html
 Mampitandrina : http://andersbrink.blogspot.com/2008/07/ethical-position-for-human-organ.html
 anivon’ny resaka foana: http://thegpclassroom.wordpress.com/2008/07/22/organ-selling-or-organ-trading/
 maneho mivandravandra: http://mrwangsaysso.blogspot.com/2008/07/old-kidneys-and-young-kidneys.html
 manana fitaovana ho loharano tsara tokoa: http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/index.html